रोनाल्डो र मेस्सीको ठाउँ कसले लिन्छन् ? - Nepal News - Latest News from Nepal
रोनाल्डो र मेस्सीको ठाउँ कसले लिन्छन् ?
By nepalnews	 On Nov 10, 2016
काठमाडौं,कात्तिक २५ । जर्मन च्याम्पियन बार्यम म्युनिखका प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटीले विश्व फुटबलका दुई ‘ठूला’ खेलाडीहरु क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लिओनल मेस्सीको विकल्पका बारेमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् । रियल मडि्रड र बार्सिलोनाका दुई स्टारले करीव एक दशकदेखि विश्व फुटबलको केन्द्रमा आफूबाहेक अन्यलाई आउन दिएका छैनन् र उनीहरुको लय छिट्टै ओरालो लाग्छ जस्तो पनि देखिँदैन ।
यद्यपि नयाँ र अहिले भइरहेका प्रतिभाहरु मेस्सी र रोनाल्डोको युग सकिएलगत्तै त्यो स्थान लिने तयारीमा देखिन्छन् । कम्तिमा एन्सेलोटीले भने त्यो देखिसकेका रहेछन् । उनले मेस्सी र रोनाल्डोको स्थान लिनसक्ने खेलाडीको रुपमा युभेन्टसका पाउलो डिवाला र बार्सिलोनाका नेयमारलाई भविश्यका दुई ‘ठूला’ स्टारको रुपमा चित्रित गरेका छन् ।
नेयमारको बारेमा त कुनै प्रमाण दिइरहनु पर्दैन कि बार्सिलोनाबाट मेस्सीसँगको उनको तालमेल हेरे पुग्छ । २४ बर्षीय नेइमारले अहिलेसम्म २२७ क्लब गोल गरिसकेका छन् भने ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीबाट ७३ क्याप जितेर ४९ गोल गरिसकेका छन् । यता पाउलो डिवालालाई पनि युरोपको उत्कृष्ट नयाँ स्ट्राइकरको रुपमा हेर्न थालिएको छ । उनले गत सिजन डेब्यु गरेसँगै युभेन्टसलाई तीन उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए ।
र एन्सेलोटीले रोनाल्डो र मेस्सीलाई चुनौति दिएका छन् कि उनीहरुभन्दा उत्कृष्ट खेलाडीहरु अहिले आइरहेका छन् । उनले भनेका छन् कि यदि डिवाला १० बर्ष युभेन्टसमा रहनेछन् भने उनले क्लवलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउनेछन् । ‘उनी अद्भुद छन्, तपाईं उनीसँग अन्य कुनै खेलाडीलाई तुलना गर्न सक्नुहुन्न । डिवाला र नेयमार अहिलेको रोनाल्डो र मेस्सीको रुपमा छिट्टै देखिनेछन् ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुनै संविधान कार्यान्वयनः मन्त्री लेखक
सिन्धुलीगढी हाफ म्याराथुनको उपाधि चण्डीदल गणलाई